IIKHABHINETHI EZI-27 ZETONI EZIKHANYAYO (IINDAWO ZOYILO OLUSISITAYILE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhinethi ezi-27 zeToni eziKhanyayo (iiNdawo zoYilo oluSisitayile)
Iikhabhinethi ezi-27 zeToni eziKhanyayo (iiNdawo zoYilo oluSisitayile)
Nantsi igalari yethu yeetoni ezimbini iikhabhathi zekhitshi ezineendlela ezahlukeneyo zoyilo. Iikhabhathi ezimbini zekhitshi ekhitshini sisitayile esikhulayo ekuthandeni kwaye sinokunyusa umdla wokubonakalayo kwisithuba, kwaye masizise ubuntu bakho obuyingqayizivele kuyilo lwakho. Sebenzisa iikhabhathi ezimbini ezahlukileyo ezinemibala zinokusetyenziswa ngokufanelekileyo kuyilo lweekhitshi ezahlukeneyo ukusuka kwindabuko ukuya kule mihla. Olu hlobo loyilo luhlala lusebenza kakuhle xa umbala omnye wekhabhathi ungumbala wokuqala okanye indawo ekugxilwe kuyo kwaye enye isetyenziswa njengombala ocacileyo. Nangona kunjalo, kuyilo lwekhitshi olomeleleyo umntu unokukhetha ukwahlula iikhabhathi zetoni ezimbini ngokulinganayo neziphumo ezilungileyo.
Ngexesha lenkqubo yoyilo kunye nokukhetha ukugqitywa, umntu unokuhlangabezana nengxaki yokungakwazi ukukhetha phakathi kokugqitywa kunye nemibala. Ngaba uya ekhitshini elimhlophe eliqhelekileyo? Kuthekani ngompu onompu ukuze ujongeke ngakumbi? Okanye usebenzise ukugqitywa kweenkuni ukuze unikezele isibheno ekhaya? Okanye kungcono, kutheni ungadibanisi ezimbini ozithandayo? Kulabo bahlala beqhekekile phakathi kokukhetha, awunakufuneka uzixinzelele ekukhetheni xa unokwenza nje zombini.
Uluvo lweekhabhathi ezimbini zekhitshi ekhitshini ayisiyonto intsha, kodwa iyasombulula ingxaki yethu yoyilo. Iikhabhathi ezimbini zekhitshi zasekhitshini zihlala zibhekisa kwiikhitshi ezinemigangatho emibini eyahlukeneyo, ihlala iphakathi kwekhabinethi esisiseko kunye neentloko ezingaphezulu. Yisisombululo esilula sokuyila esenza uyilo lube mnandi ngakumbi, lube namandla kwaye lubunike umahluko ngakumbi kunye nokulingana. Uncedo lokuya kwiithoni ezimbini kukuba ikhitshi lakho ngokuqinisekileyo alisoze libonakale lilidina okanye liyadika, kwaye iyakwazi nokuzama ukufikelela kubhalansi kunye nokubhena.
Iingcamango ezimbini zeKhabhinethi yeKhitshi
Zininzi kakhulu iikhabhathi kunye nemibala yokugqiba ekhoyo kwimarike, kwaye ukukhetha kwiintlobo ezahlukeneyo kunokuba nzima. Nazi ezinye iingcebiso onokuzisebenzisa xa ukhetha ukugqiba ikhabhinethi yakho:
Sebenzisa umbala oyintloko kunye nombala ovakalayo kwiikhabhathi zakho -Umzekelo wokusebenzisa umbala we-aksenti njengoko ithoni yesibini inokubonwa ekubeni inombala wekhabhinethi yekhitshi ephambili kunye nesiqithi sasekhitshini kwenye. Bona eminye imizekelo iziqithi zasekhitshini ezahlukileyo Apha.
Chonga umgangatho / udonga / isilingi ekhitshini -Jonga kwimibala yakho esisiseko xa ukhetha ukugqiba ikhabhinethi. Iya kuba sisandla ukubeka i-laminate / veneer / iisampulu zomthi kanye ecaleni kodonga lokugqibela kunye nombala womgangatho ukuze zibonwe ngendlela ezijongeka ngayo. Unokufumana ngokulula i-laminate kunye ne-veneer swatches kwimarike, ke thabatha ukhetho lwakho kwaye ulubeke ecaleni kodonga / umgangatho / imibala yesilingi ukubona ukuba bajongeka njani kunye.
Dlala ngokuchaseneyo -Ukukhanya kunye nobumnyama, egudileyo kunye nolungisiweyo, ocacileyo kunye nephethini, okhanyayo kunye ne-matte… Zininzi kakhulu ii-combos ezingafaniyo ongadlala ngazo!
Sebenzisa umhlophe njengebhulorho phakathi kwendibaniselwano yombala -Umgaqo olungileyo wesithupha kuyilo lwebhalansi ebonakalayo ngumgaqo we-60-30-10. Oku kuthetha ukusebenzisa iipesenti ezingama-60 kumbala oyintloko, iipesenti ezingama-30 njengombala wesibini kunye neepesenti ezili-10 ngombala ocacileyo. Sebenzisa umhlophe njengokhetho lwesithathu kunokuba yindlela esebenzayo yokuzisa ukuhambelana kunye nokulingana kuyilo.
Cinga umbala wekhabethe xa ukhetha ikhabinethi igqibile - Ukufumana ezinye izimvo malunga nokulungelelanisa iikhabhathi kunye neetafile jonga ezethu Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini iphepha.
Cinga ngokucandwa komhlaba -Ukuba usebenzisa okokugqibela okwahlukileyo kwesiseko kunye nentloko ayisebenzi kuwe, ungazama ukwahlula ogqityiweyo kwimimandla. Umzekelo: beka umbala wakho ocacileyo kwiikhabhathi eziphambili zodonga, emva koko usebenzise iinkuni kwisiqithi sekhitshi.
Sebenzisa ivili elinombala -Ukusebenzisa ivili elinombala kunye nokukhetha imibala emibini yokuncoma, emeleneyo okanye efana nayo esebenza ukubheja okukhuselekileyo.
Cinga iikhabhathi ezimnyama emazantsi kunye nokukhanya ngaphezulu -Oku kunokuba nethuba lokunceda indawo yakho yasekhitshini ijongeke inkulu ngombala okhanyayo ngaphezulu, kwaye ubeke umhlaba ngombala omnyama emazantsi.
Kule posi yimizekelo ebalaseleyo yeekhitshi ezimbini zekhitshi onokuthatha ugqozi kuyo:
Eli khitshi lincinci linembonakalo yelixesha elidibanisa ityhubhu yesilivere yokhuni kwintloko yekhabhathi kunye neelaminates ezimhlophe ezimhlophe kwisiseko. Imigca ecocekileyo kwaye ilula yeekhabhathi ifana nokudibana okungwevu nokumhlophe kwaye inika indawo yakho isibheno esicocekileyo kodwa nesitayile.
Xa ukudibanisa kugqityiwe, ungakhetha ukuba nesibindi kwaye ukhethe ukugqitywa okungadumanga njengabanye. Lo mzekelo ubonakalisa ukuba ikhabhathi esisiseko somthi wekhabhathi ikhangeleka intle kunye nekhabhathi eziphezulu eziphezulu. Kuyithatha nangakumbi ngokukhetha abamnyama ngaphezulu, ukudala umahluko okhaliphileyo kakhulu kunye nembonakalo eyodwa.
Musa ukuzikhawulela kwiinkuni okanye i-laminates, kuba i-stainless steel ikwabonelela ngobuhle obuhle. Ihlala isetyenziswa kwiikhitshi zentengiso, intsimbi engenasici iyathandwa ngabapheki / abapheki abaziingcali kuba yomelele kwaye kulula ukuyicoca nokuyigcina. Le mizekelo ibonisa ikhabhathi yentsimbi kunye nentloko emhlophe ngaphezulu. Ngenxa yokuba isiseko sigqibile esingenasici, sinika into engekhoyo yokuba ifriji yakhelwe ngaphakathi nokuba ikhululekile. Inkangeleko ephumeleleyo nayo ilula, intle kwaye intsha.
Nika ikhitshi lakho uhlaziyo oluncinci ngokudibanisa iikhabhathi zeglasi ezixhonywe ngaphezulu ukuhamba neekhabhiniki zakho ezisisiseko ezingwevu. Ukongezwa okufihlakeleyo kweglasi sele kuyinika inkangeleko yangoku.
Umahluko weBold uhlala ujongeka umangalisa xa usenza ngokufanelekileyo. Lo mzekelo ubonakalisa ikhitshi yesitayile esinesikimu sombala wangoku. Isiqithi esikhulu sekhitshi sise-cream ngelixa iikhabhathi zodonga zonke zimnyama zenza ukujonga okukhaliphileyo ekhitshini.
Le khitshi yothando yaseFrance isebenzisa ikhitshi lokugqiba i-rustic ngokudibanisa nekhabhathi emhlophe yodonga iikhabhathi ukuyinika isibheno se-rustic esithambileyo.
Ukuxuba iikhabhathi zasekhitshini zelizwe kunye nezinto zefanitshala zesitayile somzi mveliso kunika eli khitshi uvakalelo ngakumbi / olubuyileyo. Ikhitshi kubonakala ngathi lahlulwe ngokwamacala amabini, indawo enye emnyama kwaye enye imhlophe.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseMahogany zilayini udonga kwicala lasekhohlo lekhitshi ngelixa ikhitshi eliphambili limhlophe, ligxininisa umahluko ekusebenzeni kwezi ndawo zimbini. Izitulo zebar Mahogany zikwanceda ukudibanisa ukugqitywa kokubini kunye.
Unokuqaphela ukuba iikhabhathi zaseMahogany ziyahambelana nombala wemiqadi yophahla ukwenza umbala odibeneyo. Iikhawuntari eziphambili zekhitshi kunye nezixhobo zokubala zaseMahogany zisebenzisa izixhobo ezifanayo zokubuyela umva kunye nekhawuntara yokugxininisa ukuba zombini ziyinxalenye yekhitshi.
Umdibaniso ongaqhelekanga wekhabhathi yentloko ye Beechwood kunye ne redwood base cabinets, le khitshi yenza umdla obonakalayo, ngakumbi ngegolide 3D iithayile zangasemva.
Eli khitshi langoku linemibala emi-2 kunye nemibala emi-2 yokwenza inkangeleko enamandla. Iikhabhathi ezisisiseko zikwi-matte ashwood laminates ngelixa iintloko ezingaphezulu zikwi-laminates emhlophe ecwebezelayo. Itafile emhlophe eqinileyo yomphezulu womhlaba ibopha ukujonga konke kunye.
Le khitshi yangoku inezinto ezimbini zeekhabhathi zokwahlula isithuba ngokuthe nkqo. Umgangatho weekhabhathi zophahla ugqityiwe eMahogany emnyama eneenkozo ezintle kakhulu yenza ukuba ikhangeleke ngathi yeyangoku xa idityaniswe ne-laminates emhlophe emenyezelayo.
Ukwahluka kwe-walnut emnyama kunye nomhlophe kujongeka kunomdla kakhulu. Lo mzekelo unecala elinye lasekhitshini elinamakhabhathi amhlophe kunye neekhawuntari ezimnyama ngelixa elinye icala libonisa ikhomotweni echaseneyo yamantongomane amnyama kunye namabala amhlophe emabhile.
Eli khitshi lanamhlanje lincinci lidibanisa ii-laminates ezimnyama kunye neglasi ebhalwe ngasemva ene-laminates emhlophe ecwebezeleyo yokwenza umahluko omkhulu kuyilo olulula kakhulu lwekhitshi.
Umdibaniso olula ongwevu nomhlophe unganika iikhabhathi zakho uhlaziyo olukhawulezileyo oluhlaziyayo. Ukudityaniswa kombala okhanyayo okusetyenzisiweyo kweli khitshi kwenza ukuba indawo ibonakale ingaqhelekanga kwaye ikhululekile.
Izikimu zombala zeAchromatic zijongeka zintle kunye neekhitshi zangoku ezinje ngalo mzekelo. Ngaphandle kwesiseko esimnyama kunye nokudityaniswa okumhlophe kwentloko, umahluko phakathi kwe-matte countertop kunye ne-backsplash ebengezelayo inika uyilo ngakumbi.
Ikhabhathi yeklasikhi ephefumlelweyo yeklasikhi yadityaniswa kunye neekhabhathi ezixhonywe ngamaplanga zenza iipateni ezahlukeneyo kunye nezinto ezenziwe ebusweni. Umdibaniso wekhrimu emhlophe kunye namalahle angwevu unika ikhabhinethi yeklasikhi uhlaziyo lwangoku.
Enye indlela yokusebenzisa iithoni ezimbini kwiikhabhathi zasekhitshini kukuyisebenzisa njengesigama. Ngokufanayo kulo mzekelo, uninzi lwekhitshi luphelile, kodwa enye yeekhabhathi ezingaphezulu isebenzisa ii-laminates ezimhlophe ezimhlophe endaweni yoko, inika ugxininiso ngakumbi.
Iskimu sombala esihlaziyayo esimhlophe kunye nesikhanyayo esingwevu sinika le khitshi yakudala isibheno esincinci kakhulu kwaye esihlaziyayo. Umhlophe ufakwa kwisiqithi esikhulu sekhitshi kwaye usebenzisa ibhloko eqinileyo yemephu yemephu, ukuyenza ibonakale / isebenze njengesiqwenga somlomo kule khitshi. Ukusetyenziswa kwezixhobo zensimbi ezingenasici kunye neziqwenga ezivakalayo zongeza ukubonakala kwalamaxesha kwisithuba.
Ngokufana nekhitshi elidlulileyo, ithoni yesibini yokugqitywa kwekhitshi ekhanyayo isetyenziswa kwisiqithi sasekhitshini, kodwa kulo mzekelo, uyasetyenziswa kwiindawo ezichaseneyo. Nangona kunjalo, endaweni yokugqitywa kwekhawuntari ekhethekileyo, isebenzisa okufanayo kuzo zombini iikhawuntari eziphambili nakwisiqithi sasekhitshini. Isiqithi esimnyama se-wengue sasekhitshini sihambelana nomgangatho kunye nokugqitywa kwesitulo sebha ukujonga okungaphezulu.
Imizekelo yangaphambili ibonakalise imibala eyahlukileyo enesibindi / yokugqitywa kweekhitshi ezimbini zethoni, kodwa lo mzekelo unokwahluka okufihlakeleyo kokugqiba, usebenzisa i-walnut yegolide kunye ne-wengue, ukwenza ukugqitywa kwekhitshi ekhanyayo.
Iingcango ezimbini zeKhabhinethi yaseKhitshi
Apha sabelana ngeendlela ezahlukeneyo zekhitshi ngokugxininisa kwiingcango zekhabhathi ezimbini zethoni. Oku kunokufezekiswa ngokusebenzisa inkqubo yoxinzelelo, ukufaka izixhobo zedrama okanye ukupeyinta iinxalenye ezifihliweyo ukugxininisa ukubonakala kwamacala amathathu kwikhabhinethi.
Ngaphandle kwamacandelo / iindawo zekhitshi ezinemibala emi-2 eyahlukileyo, enye indlela yokwenza ikhitshi ekhishini kukuyisebenzisa njengombala ocacileyo. Le khitshi iphefumlelweyo yaseCorintic isebenzisa umbala wesibini kwiitrayi kunye neenkcukacha zokukrola. Ipeyinti yegolide emhlophe emhlophe iyinika inkangeleko entle nenomdla, kwaye ikwagxininisa ngakumbi iinkcukacha ezifakwe kwikhabhathi.
Iikhikhini ezimhlophe ziya kuhlala zingenasiphelo, kodwa zinokuba yinto encinci ukuba uyigcinile icabalele. Le khitshi yelizwe elimhlophe ibonisa indlela yokongeza umbala ogqamile (ital kule meko) enokubangela ukuphucuka okumangalisayo kuyilo. Uye wayinika ngokukhawuleza amandla kunye nolutsha.
Le khitshi yesiFrentshi yasekhitshini ihamba kunye neetoni ezahlukeneyo ngokudibanisa i-antique kunye ne-sage eluhlaza. Imibala ethambileyo inceda ithoni phantsi kombala o-orenji onesibindi we-terracotta flooring kunye neetafile zegranite, ezenza indawo entle enekhaya kwaye iphumle.
Umama wezimvo zesipho somyeni
Ukuba uziva ukhaliphile kwaye unomdla, peyinta iikhabhathi zekhitshi zesitayile esimnyama kunye nokudala ubuxhakaxhaka bokupeyinta ngokupeyinta imisonto kunye nemizobo ngegolide. Isiphumo yinkangeleko eyomeleleyo kwaye eyahlukileyo enokuthi ngokulula ibe sisiqwengana sencoko ekhaya lakho.
iinwele ezinde eziphakathi kwiindwendwe zomtshato
Ijezi ezinxibayo zomtshato
imiphezulu yeetafile zakhiwe ngexabiso lenyengane
izipho zomqhaphu ngenxa yakhe